March 10, 2017 No Comments News, Somali
Alia Bhatt iyo Varun Dhawan waxay soo jiiteen Dad badan oo xiiseeya filimaanta Bollywood-ka iyo Weliba taagerayaal u gooniya dhowrkii filim ee ay isla soo sameeyeen. Waxay ka mid noqdeen Lamanayaasha Shaashadaha aflaamta hindida loogu xiiseeyo oo ay kala wareegeen Shah Rukh khan Iyo kajol.
Alia Iyo Varun Dhawan labadoodii maree u danbeysay ee ay filim ka soo wada muuqdeen waxay noqdeen Hit.
Laakinse dadka in badan oo kamid ah waxay is weydiinayaan sidey uga soo baxeen Doorarka filimkoodan cusub oo lamida doorarkii ay ku soo bandhigeen Filimaanti ay horey uso wada jileen ?
Filimkaan waxaa soo saartay Shirkadda Karan Johar ee Dharma productions waxaana director ka ah Shashank Khaitan.
MAXUU KU SAABSAN YAHAY FILIMKU?
Wuxuu ku saabsan wiil ka dhashay qoys Hodon ah, wiilkaasooo Lacagtu aysan aad u Fasahaadin looguna waco Badri (Varun Dhawan) iyo Gabar yar oo Himiladeeda ay aad u sareyso Vaidehi Trivedi (Alia Bhatt) kanasoo Jeeda Kota. Wiilkaan Badri La dhaho qorshihiisa ugu weyna waa Siduu Vaidehi Ku kasban lahaa qalbigeeda taasoo uu jaceyl u qaaday markuu xaflad ku arkay balse Vaidehi Arintaas uma soo jeedo.
Labadaan shakhsi Nolosha mid walba waxbaa u cad oo qorshuu wataa, Wiilkaan Badri ahna ‘Maya’ Jawaab cad u qaadan mayo wuxuusana fahansanyen Gabdhaan (vaidehi) in aysan Duufsaneyn Wiilkaan quruxda Badan kaasoo ka dhashay Qoys Lacag leh kaliya ee aan Waxba ku toorneen, sidoo kale waxbarashadiisii Fasalka 10-naad uga tagay markuu baasay mana uusan gelin Jaamacad.
Sheekadda filimkaan aad bay u xiiso badantahay Waxaana la ogaan doona Meshiii ay kusoo gaba gaboobeyso filimka.
FILIMKAAN MAXAA XIISO DHEERAAD AH U YEELAYA?
Varun Dhawan Filimkaan waxuu ka dhigey mid aad looga helo Sababtoo ah waa awoodda jiliinkiisa uleeyahahay inuu kaga qoslisiiyo xitaa haddii uusan jileen filim Comedy ah ama shactiro (Drama) waana arrinta dhalisey lagu tilmaamo Inuu isku darsaday Awoodda Salman Khan oo wuxuu leyahay awoodda Superstar iyo Jir dhisanba, wuxuu kaloo leeyahay Xirfaddii Govinda oo kale ee shactiradda.
Varun Doorkiisu waxa ku lamaansanaan doona comdey.
Meelaha la xusi karo waxaa kamida markuu isku dayo inuu Soo jiito Alia Bhatt uuna ka war helo inaysan wax Muhiimad ah siineen oo uu is daalinayo taaso ku kalifeysa isagoo Guulo badan soo gaaray oo dhaqamadiisii xumaa wax ka badalay noqdeyna nin shaqeysta Isku filnaashana gaaray in Gabadhii uu jeclaa kasiii fogaato laakiin saas ugama harayo oo Dagaal badan buu u galaya siduu ugu dhawaan lahaa jaceylkiisa iyo reerkeeda iyadoo xitaa uu cuntadda u karinayo reerkeeda dharka dhaqena u noqonaya.
Dhanka kale Alia bhatt waxay iska indho saabaysaa sharciyadda reerkeeda u yaal inay jabiso waxay si aan gabasho laheen uga sheegaysaa inaysan Jaceylka Badri usoo jeedin ayna dhanka kale dareemayso inay Niyad jabisay Wiilkaan aadka u jecel.
Filimkaan Badrinath ki Dulhania waxaa isku dhex milmay shactiradda oo aan aad u badneen laakin loogusoo bandhigi doono qaab aan ka hor imaaneyn isku dheeli tirnaanta sheekadda Filimkaan.
Saaka ayaa la saaray Shaashadda caalamka iyo kuwa India waxaana laga filayaa in saddexda maalmood ee hore uu ka gudbi doono tijaabadda soona xareyn doono Lacago badan.